Toekarena sy Fandraharahàna · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Avrily, 2018
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Avrily, 2018
Shina: Ho avy “angamba” ny fanafarana kolontsaina tsy misy famerana
Amerika Avaratra19 Avrily 2018
Vaovao miavaka raha marina fa nanaiky hamarana ny famerana ny fanafarana vokatra fialam-boly i Shina
Japana: Famarotam-baovao Nataon'ny Mpiasa tao amin'ny Mpampiely Vaovaom-panjakana NHK (Tapany Faharoa)
Azia Atsinanana18 Avrily 2018
Efa nihena ny resabe tamin'ny herinandro momba ilay famarotam-baovao tao amin'ny mpampiely vaovam-panjakana NHK tao Japana, niaraka tamin'ny fanoloan'i Fukuchi Shigeo, mpanolotsaina taloha ny Fivarotan-dabiera Asahi, an'i Hashimoto Genichi, ilay filohan'ny NHK tototry ny olana, izay nametra-pialàna andro vitsy talohan'ny faran'ny fepotoana fiasany.
Kazakhstan: Ny Krizy Ara-Toekarena Sy Ireo Vokany
Azia Afovoany sy Kaokazy17 Avrily 2018
Ho tohin'ny krizy malefaka ara-toekarena sy ara-bola, izay naleon'ny governamanta nantsoia hoe "fanitsiana ny tsena", tohizan'ireo bilaogera ny miady hevitra mikasika ireo vokany.
Kazakhstan: Mitolona amin'ny Fiainana sa Miadana?
Azia Afovoany sy Kaokazy16 Avrily 2018
Tsy fanitaran-dresaka ny flazàna fa firenen’ny fifanoherana i Kazakhstan: ny fahantrana fahadiranovana eo anilan’ny harena voajanahary tsy hita pesipesenina, ny fitomboana ara-toekarena miaraka amin'ny fitotongananan'ny sehatra ara-piarahamonina sy ny fihitaran'ny fahefam-panjakana, ary ny fandeferana mifanila amin’ny fanavakavahana.
Vao haingana, nokilasian'ny Departemantam-panjakana Amerikana ho anisan'ireo firenena "folo voalohany" amin'ireo firenena tena mpanao didy jadona erantany i Ozbekistana. Nandritra ny efa ho roapolo taona nanjakany, ny filoham-pirenena I. Karimov sy ny ankolafiny no nandray an-tanana ny fifehezana ireo lafim-piainana rehetra ao amin'ny firenena - ara-politika, ara-toekarena ary ara-tsosialy.